ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ဗေဒင် ပညာရဲ့ ဖြန့်ကျက် နိုင်မှု ဘောင်နဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိ မဖြစ်ရအောင် ဗေဒင် ပညာကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိသာ အသုံးချ မလဲ
ဗေဒင် ပညာရဲ့ ဖြန့်ကျက် နိုင်မှု ဘောင်နဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိ မဖြစ်ရအောင် ဗေဒင် ပညာကို ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိသာ အသုံးချ မလဲ
ဒီပို့စ် မှာ ကောမန့် ရေးသွားတဲ့ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ စာနဲ့ အတွေးကိုရော www.lightofbuddhism.blogspot.com မှ ပို့စ်ကို လာရောက် ကွန်မန့်ပေးသူရဲ့ ထေရ၀ါဒနှင့် သက်ဆိုင် သော၊ ထို့ပြင် မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင်တွင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ဘာသာရေး မေးခွန်းများ ဖြေပေး ခဲ့သော ဆရာတော် ဦး တိလောက သာရ (စာရေးဆရာ- ရဝေထွန်း) ဧ။် အာဘော်နှင့်လဲ ကိုက်ညီ သော ကောမန့် ကြောင့် သဘောကျ နှစ်သက် ထောက်ခံ မိတဲ့ အတွက် ပို့စ် အဖြစ် မူရင်း စာသား အတိုင်း ပြန်လည် တင်ပြ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ နာမည်နဲ့ နေရပ်သာ ပါပြီး ပြန်လည် ဆက်သွယ်ရန် စာတိုက်ကို အားကိုး မရပါသဖြင့် ဒီလို တင်တာကို ဆရာတော်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံ နိုင်သော်လည်း ဆရာတော်မှ ခွင့်ပြုမည်ဟု မျှော်လင့်မိ ပါသည် ဆရာတော် ဘုရား…
ဗေဒင်က ရက်ရာဇာနှင့်ပြဿဒါးကို ပဓာန ထားသကွဲ့ ။မြတ်စွာဘုရားက ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် ပဓာန ထားသကွဲ့ ။ ဗေဒင်က မဟာဘုတ်လေးပါး ပဓာနထား၍ ထူသကွဲ့ ။မြတ်စွာဘုရားက သမ္ပတိလေးပါးကို အဓိကထား၍ ထူသကွဲ့ ။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ဆန့် ကျင်တာကို ယုံလျှင် ဘုရား၊တရား မယုံရာ ကျတာပေါ့ ။
နမ္မား ၊ ကချင်ပြည်နယ်
(၁) ဗေဒင် ပညာ ရဲ့ မှန်ကန်မှု ။
ဒီပညာကဟောနိုင်တာက ကာလ(၃)ရပ် (၀ါ) အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေ ၊ လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်တွေ ၊ စိတ်နေသဘောထား (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ) နဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး ၊ အချစ်မေတ္တာရေး စတာတွေ ဖြစ်ပါမယ်။
ဒီပညာတွေ မှာ လွဲမှားနိုင်တဲ့ အချက် (၂) ချက်ရှိပါတယ်။
(က) ဟောသူက မကျွမ်းကျင်လို့ ဖြစ်စေ၊ ရွှီးနေလို့ ဖြစ်စေ၊ ကျက်မှတ်ထားတာ ၊ တွက်ချက်တာတွေ ဆံုးဖြတ်တာတွေ မှားလို့ဖြစ်စေ လွဲနိုင်ပါတယ်။
(ခ) နောက်တစ်ချက်က အဟောခံရသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်တွေ ကြောင့်လဲ လွဲနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံကတော့ ကိုယ်ဟောနေတာ ဆုံးဖြတ်တာမှန်ရဲ့ သားနဲ့ လာမေးသူက မမှန်သလို အမူအရာပြတာကြောင့် ပုထုဇဉ်ဗေဒင်ဆရာလဲ စိုးရွံ့ပြီး မှန်နေရာကနေ အမှားတွေ ဟောမိတတ်တယ်။ ဒါအပြင့် အားလုံးမှန်နေပေမယ့် လာမေးသူက ကောင်းမှု တွေလုပ်ပြီး မကောင်းကံတွေကို တားနိုင်တာကြောင့်လဲ မှားသွားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်(၁၄) နှစ်ကျော်ကျော် လေ့လာဖူး၊ဟောခဲ့ဖူးသမျှမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စွာ ဟောရဲတာက သူရဲ့ စိတ်နေသဘောထား ၊ အတိတ် ဖြစ်ရပ်များ သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေ မှန်နေတာနဲ့တင် လာမေးသူဟာ အရမ်းကို တက်ကြွလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေး ၊အနာဂတ် ၊ ပညာရေး ၊ လက်ရှိပြသနာတွေ စတာတွေကို ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲ ဟောရတာများပါတယ်။ အားလုံးကွက်တိ မမှန်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဆိုရင် သူကိုယ်တိုင်က ပြောင်းလဲ နိုင်တာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယတြာကို ပြောတာမဟုတ်ပါ။ အခြားသော ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာဆိုင်ရာ ကုသိုလ်ရကြောင်းလုပ်ရပ်များကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ဘုရားရှင် နဲ့ ဗေဒင် ။
ဘုရားရှင်ရှိစဉ်ကပဲ မာဂဏ္ဍီပုဏ္ဏားထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွက်ကြည့်တော့ မဝေးတော့တဲ့ တစ်ခုသော လပြည့်ည သန်းခေါင်မှာ သေမယ်လို့ အဖြေရပါတယ်။ သူ့မိန်းမကလဲ တွက်ကြည့်တော့ လဲ ဒီလိုပဲ ။ ဒီတော့ ဘုရားရှင်ကို လာမေးပါတယ်။ ဘုရားရှင်ကလဲ သေမယ် လို့ပဲ ဟောပါတယ်။ အဲဒီအခါ ပုဏ္ဏားလန့်ပြီး ငါသာမျောက်ဖြစ်ရင် စားဖို့ ငှက်ပျောသီးတွေ စိုက်မယ်၊ ငှက်ဖြစ်ရင် နေဖို့ ညောင်ပင်စိုက်မယ် ၊ငါးဖြစ်ရင်နေဖို့ ရေကန်တူးမယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုး စဉ်းစားပြီး စိုက်ပျိုး လိုက်တာ အများကြီးပါပဲ ။ နောက်တော့ လမ်းဖောက်တာတွေပါ ပါလာတယ်။ သူက ကုသိုလ်ရဖို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူသေပြီး ဘာကောင်ပြန်ဖြစ်ဖြစ် နေရတာ အစဉ်ပြေအောင် လုပ်တာပါပဲ ၊ ဒါပေမယ့် သူစိုက်ပျိုးထားတာတွေ ကြီးလာတော့ မျောက်တွေ ၊ ငှက်တွေ ၊ ပါးတွေ စသည်ဖြင့် စားကြ ၊သောက်ကြ၊နေကြ၊နားကြဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီညမှာတော့ သူက အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ သေမယ့် အချိန်ကို စောင့်နေပါတယ် ။အာရုဏ်တက်ချိန်အထိလဲ မသေရော၊ သူ့ကို စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ရမလားလို့ ဘုရားရှင်ကို စိတ်ဆိုးပြီး ရန်တွေ့ဖို့ ထွက်လာပါတယ်။
ဘုရားရှင်က ဟောအပြီးနောက်ပိုင်း ဘာတွေ လုပ်လဲဆိုတာမေးပြီး ဒါတွေဟာ အသက်ရှည်ရာ ကောင်းမှုတွေ ဖြစ်ကြောင်း ဇာတ်တော်ဆောင်ပြီး ဟောပါတယ်။
ဒီတော့ သာမာန်ဗေဒင်လို သက်သက်မှာ မမှန်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။
ကံ နဲ့ ကံ ရဲ့ အကျိုးကိုယုံရပါမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဂြိုလ်စီး၊ ဂြိုလ်နင်း ၊ နက္ခတ်၊ ရာသီ နဂါးခေါင်းလှည့် ၊ လက်ဝါးမှ လမ်းကြောင်းများ ညွှန်ရာတွေကိုပဲ ယုံနေမယ်ဆိုရင် ကံ နဲ့ ကံ၏အကျိုးကို ပယ်ရာကျပြီး ကမ္မဿကတ သမာဒိဋ္ဌိ မဖြစ်တော့ဘဲ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတောင်ဖြစ်သွားပါမယ်။
(၃) ဘုရားရှင်၏ သဘောထား ။
ဘုရားရှင်ကတော့ ဗေဒင် နက္ခတ် တွေကို မယုံဖို့ ဟောထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ မှတ်မိတာတော့ (၂)ခုရှိတယ်။ နက္ခတ္တ သုတ် မှာ နက္ခတ် ကောင်းကို စောင့်နေတဲ့ လူမိုက်ကို အခွင့်ခါကောင်းတွေကို ကျော်ဖြစ်သွားကြတယ်။ကောင်းသော အလုပ်ကို စလုပ်သော နေ့မှာ ကောင်းသော နကတ်ရှိတယ်။ ကောင်းကင်မှာ ရှိနေတဲ့ နက္ခတ် တွေက လူရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး လို့ ဟောပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အများစုရွတ်နေတဲ့ ပုဗ္ဗာဏှသုတ်ပါပဲ ။ ပုဗ္ဗာဏှသုတ် ဟာ
ကိုယ်၊နှုတ်၊စိတ် (၃)ပါးကို ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်လျှင် အချိန်တိုင်းဟာ ကောင်းသော
နက္ခတ် ၊ကောင်းသော နိမိတ်များသာ ဖြစ်နေမည့် အကြောင်း ရတနာ (၃)ပါးကို အခြေခံ တိုင်တည် သစ္စာတရားကို ဖော်ကျူးတဲ့ သုတ်တော် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဘုရားရှင်ဟာ ဗေဒင နက္ခတ် ကို လက်မခံ ၊မယုံကြည်ကြောင်း အတိအကျ ဟောထားတာ တားဆီးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ဆောင်မှုမှာ အများကြီး မူတည်နေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) လက္ခဏာပညာနဲ့ မှန်ကန်မှု ။
နောက်တစ်ခုကတော့ လက္ခဏာ ပိုင်းမှာ ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ လူ တစ်ထောင်ကျော်ကို စစ်ဆေးဟောပြောဖူးပါပြီ ။ လူမျိုးစုံ ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ စရိုက်စုံ ကိုလဲ ဟောဖူးပြီ ။ ဟောရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဒီပညာဘယ်လောက် တိကျသလဲ ၊ ဒီပညာနဲ့ လူတွေကို ဘာများကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့အားဖြင့် - ဆရာမတစ်ယောက်ကို အသက် (၃၃) နှစ်မှာ အစာအိမ်ရောဂါကို ခွဲစိတ်ပြီး သေမယ်လို့ အမှတ်မထင် ဟောခဲ့ဖူးတယ်။ ကျန်တဲ့ သူရဲ့ ငယ်ဘ၀နဲ့ မိဘအကြောင်းတွေ စသည် စိတ်ထားတွေ မှန်နေတော့ သူက ယုံလွန်းပြီး စိတ်ဓာတ်ကျပါတယ်။ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ပြီး ဆေးရုံပေါ်မှာ နောက်ဆုံးရက်တွေမှာ ကိုယ်ဟောထားတာကိုပဲ တခြားသူတွေကို ပြောပြီး သူသေတော့မယ်လို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာ အားငယ်စွာနဲ့ သူသေသွားပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ပြန်ပြောကြတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်္ပြီး ၊ သေမှာနဲ့ ပတ်သက်တာကို မဟောတော့ဘူး။ သတိပေးရုံပဲ ဟောဖြစ်တော့တယ်။ တကယ်ကတော့ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နေရင် ဒီလို ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သေမယ်လို့ တော်တော်တိတိကျကျ ပြောလို့ ရနေတဲ့ သူငယ်ချင်းပါ။ အဆုတ်မှာ ထိခိုက်ပြီး ( အဆုတ် ရောဂါ ပေါ့) သေနိုင်တယ် လို့ စိတ်မှာ သိနေတယ်။ သူ့ကိုတော့ ဆေးလိပ်ဖျက်ပါ ။ အာဟာရရှိအောင်စားပါ ။ အကြံပေးဖြစ်တယ်။ ပြုပြင်လို့ရကြောင်း ၊ မပြုပြင်ရင် အသက်အန္တရယ်ရှိကြောင်းတော့ ပြောဖြစ်တယ်။ သူတကယ် ကို မသေချင်စိတ်မျိုးနဲ့ လုပ်တယ်။ အခုထိ ကျန်းမာစွာရှိနေပါတယ်။ လက်ဝါး ၊လက်သည်း ၊ လမ်းကြောင်းအရောင် တွေလုံးဝပြောင်းတယ်။ ကျန်းမာသူတစ်ယောက်လက်မျိုးပြန် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါတွေတော့ နောက်မှ ပြောတော့မယ် ။စိတ်ကနေ ၊လုပ်ရပ်ကနေ ကိုယ့်လက္ခဏာကို ပြောင်းအောင်လုပ်ပြ်ိး ဆရာချင်းပြိုင်တာတွေတောင်ရှိပါတယ်။ စိတ်ပေါ်မှာ နေ့စဉ်ဘ၀လုပ်ကိုင်မှုတွေမှာ မှီခိုနေတာမို့လို့ အမြဲ မမှန်ပါဘူး။
(၅) ဘုရားရှင်နဲ့ လက္ခဏာဖြစ်စဉ်။
(တကယ်ကတော့ (၂)ခုရှိတယ်။ ဒီမှာတော့ တစ်ခုပဲ ပြောတော့မယ်။)
သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားမွေးခါစက နိမိတ်ဖတ် လက္ခဏာဖတ်ခဲ.တဲ.သူ အားလုံး (၉) ဦးရှိပါတယ် ။ ရာမပုဏ္ဏား ၊ ဇေပုဏ္ဏား ၊ လက္ခဏပုဏ္ဏား ၊မန္တိကပုဏ္ဏား ၊ယညပုဏ္ဏား ၊ သုဘောဇ ပုဏ္ဏား နဲ. ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏား ဟူသော မင်းတိုင်ပင်ခံ ပုဏ္ဏား (ဂ) ဦးဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်တဦးကတော့ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဓန မင်းကြီးနဲ. မယ်တော်ဘုရား ကိုးကွယ်တဲ. ဈာန်အဘိဥာဏ်ရ အသိတရသေ့ကြီး ဖြစ်ပါတယ် ။(အချို့နေရာများတွင် ဒေ၀ိလဟု ရေးတတ်ကြသည်။ ) ဒီ (၉)ယောက်လုံးက သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားလေးကို ဗေဒင်တွက်ခဲ.ကြတာ မဟုတ်ဘဲ လက္ခဏာဖတ်ခဲ.ကြတာလို. ဆိုပါတယ်။
လက် လက္ခဏာသာဖတ်ခဲ.တဲ. ပုဏ္ဏား (၇) ယောက်ကတော့ စကြာဝတေးမင်းသော်၎င်း ၊ ဘုရားသော် ၄င်း ဖြစ်မယ် လို့ပဲ ဟောခဲ.ကြပါတယ် ။ ခြေ လက္ခဏာ ပါ ဖတ်တဲ. ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏား ကတော့ လက်ညှိုး -၁ချောင်းပဲ ထောင်ပြီး ဧကန်မုချ ဘုရား ဖြစ်မယ် လို. ဟောခဲ. ပါတယ် ။(မှတ်ချက် - လက္ခဏာ ဆိုတာ အမှတ်အသားဆိုတဲ. အဓိပ္ပါယ်သာရှိပါတယ် ။ လက် လက္ခဏာ၊ ခြေ လက္ခဏာ လို.ပြောမှ ပြည့်စုံတယ်လို. ဆိုပါတယ်။လက္ခဏာ ဟုသာပြောပါက တကိုယ်လုံးရဲ. အမှတ်အသားများကို ကြည့်ရပါမယ် ) ဈန်အဘိဥာဏ်ရ အသိတရသေ့ကြီး ကလဲ ဧကန်မုချ ဘုရား ဖြစ်မယ် လို. ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏား ရဲ. ဟောချက်ကို အတည်ပြုခဲ.ပါတယ် ။
လက္ခဏာဖတ်ခဲ.တဲ.သူပုဏ္ဏား (၈) ဦးမှာ (၄)ဦးအိမ်ထောင်ပြုပါတယ်။ ကောဏ္ဍညနဲ့ (၄) ဦးက မပြုခဲ.ပါ ။ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ (၅) ပါးမှာ ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏားကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဘဒ္ဒိယ ၊ ၀ပ္ပ ၊ မဟာနာမ် ၊ အဿဇိ (၄)ပါးဟာ လက္ခဏာဖတ်ခဲ.တဲ.သူ အိမ်ထောင်သည်ပုဏ္ဏား (၄) ဦးရဲ. သားတွေဖြစ်ပါတယ် ။ သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားတောထွက်တာနဲ့ ဘုရားမုချဖြစ်မယ်လို. သူတို.ရဲ. ဖခင်တွေက ပြောပြခဲ.လို့ ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏားနဲ.အတူ ဘုရားလောင်းကို စောင့်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီတော့ ဒီပုဏ္ဏား တွေလဲ သုဒ္ဓေါဓန မင်းကြီးအလိုကျ (၂)ခွပြောခဲ.ပေမယ့် သူတို့စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားရဲ. လက် လက္ခဏာအရ ဘုရားဖြစ်မယ်လို. ယူဆခဲ.ကြပုံရပါတယ်။ လက် လက္ခဏာမှာ စကြာဝတေးမင်းသော်၎င်း ၊ ဘုရားသော် ၄င်းဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် (၂) ခွ ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဲဒီ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ. ခြေ လက္ခဏာက " စက်ရာ " မှာတော့ ကာမဂုဏ်ခံစားမယ့်သူလား ၊ ကာမဂုဏ်စွန့်ပယ် မယ့်သူလား တိတိကျကျဖော်ပြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ပြီး ကာမဂုဏ်ခံစားမယ့်သူဆို စကြာဝတေးမင်း ၊ ကာမဂုဏ်စွန့်ပယ် မယ့်သူ ဆို ဘုရားဖြစ်မယ်လို. ဆုံးဖြတ်နိုင် ပါတယ် ။
ဒါက ပညာအရ တော့ ဟုတ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်တိတိကျကျဟောထားပြီး တောမှာ စောင့်နေတဲ့ ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏားလဲ ဘုရားလောင်းက ဒုက္ကရစရိယ မကျင့်တော့ဘဲ အစားအစာလဲ ပြန်စားရော ဘုရားမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ ပြန်ပြီး ယုံကြည်သွားလို့ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ (၅) ပါးလုံး ဘုရားလောင်းကို စွန့်ခဲ့ကြတယ် မဟုတ်လား။ ဘုရားဖြစ်ပြီး ဓမ္မစကြာတရားပြန်လာဟောတော့တောင် သံသယ မေးခွန်းတွေ ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏားကိုယ်တိုင် အများကြီး မေးခဲ့တာပါပဲ။ ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ သူကိုယ်တိုင်မယုံနိုင်ဘူးလေ။တိုင်းပြည်မှာ အတော်ဆုံးလို့ ပြောရမယ့် သူလဲ ကိုယ့် ကိုယ်ကို မယုံတာတွေ့ရတာပါပဲ။
ဒီပညာတွေဟာ လေးစားစရာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလောက်အောင် တိတိကျကျဟောနိုင် ၊ ပြောနိုင်တာတွေ ရှိသလို ၊ ကာယကံရှင်ကလဲ ပြန်ပြီးပြုပြင်နိုင်ကြောင်း သေချာနေပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န ပြောသလို ပြောရရင် လိမ်းဆေးအဖြစ်ပဲ သုံးသင့်တဲ့ ဆေးကို သောက်ရင် ပြသနာ အကြီးအကျယ်တက်ပါမယ်။
ဒီပညာတွေကို လေ့လာရုံ ၊ စူးစမ်းရုံ နဲ့ မရပ်ဘဲ အရမ်းကို ယုံပြီး ဒီဂြိုလ်ထဲရောက်နေလို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာ ၊ ဒီ လဆိုရင် ဒီရာသီဖွားမှာ ဒီလို ဖြစ်မှာဘဲ ၊ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ်မထူးပါဘူး ဆိုတာမျိုးကံ နဲ့ ကံ အကျိုးကို ပယ်လိုက်ရင်တော့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ ကိုပါ ဆန့်ကျင်တဲ့ မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိကြီး ဖြစ်သွားပါမယ်။ကိုယ်ကျိုးနည်းသွားပါမယ်။ဒါကြောင့် ပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့ သုံးချင်သုံးပါ ။ ဘယ်လောက်မှန်နေပါစေ ။ အနာဂတ်အတွက် မမှန်နိုင်သေးဘူး၊ကိုယ်နဲ့ ပိုဆိုင်တယ်လို့ အပြည့်အ၀ယုံကြည်ဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ ဓါတ်ကြီးလေးပါးဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယောပဲရှိတယ်။ (အန္တော= တေဇော၊ ဂဗ္ဘေ= အာပေါ၊ စရေ= ၀ါယော၊ ၀ံသေ= ပထ၀ီ) ဗေဒင် ဘာသာရပ် စကားနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပါဠိ စကားတို့ နှိုင်းယှဉ်ချက် ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဆိုလည်း ဗေဒင်ကိုတော့ အားမကိုးထိုက်ပါဘူး။ ဘေးကို ကြောက်လို့ ကိုးကွယ်ရင်တော့ ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ(အောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာ)ပဲဖြစ်မယ်။
သာသနာကို ဖျက်စီးသည့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေး ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ပါဦး……………………
သာသနာကို ဖျက်စီးသည့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ
ကြက်လဲမရောက်၊ ကျီးမမြောက်သား ၊
အောက်ကလိအာ၊ အာကလိအောက် ၊
မနာစောက်အောင်၊ မိနောက်မကျေ ၊
ဘနောက်မမီ၊ မပီမပွန် ၊
တွန်တကျယ်ကျယ်၊ ကြက်ကျီးငယ်သို့ ၊
တင့်တယ်မဲ့စွာ၊ ပညာမကြီး ၊
ဗန္ဓတ်ကျီးသို့၊ နှုတ်သီးမစောင့် ၊
သာသနာအပြင်ဘက်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရက်ရက်စက်စက်ဖျက်ဆီးခဲ့သူမှာ အသောကမင်းကြီးနောက် ခြောက် ဆက်မြောက်မင်းကို သတ်ဖြတ်၍ ဘုရင်ဖြစ်လာသော သုင်္ဂပုရှာမိတြအမည်ရှိ ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏား စစ်သူကြီး ပေတည်း။ ထိုစစ်သူကြီးအာဏာရသည်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အမြစ်ပါမကျန်အောင် ဖျက်ဆီးလေတော့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းမှန်သမျှ မဂဓတိုင်း၊ ကောသလတိုင်း အစရှိသော မဇ္ဈိမဒေသ၌ မနေ၀ံ့တော့သဖြင့် တိုင်းစွန်ပြည်ဖျားသို့ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ကြရသည်။ သာသနာနှစ် ၁၂၀၀ ကျော်လာသောအခါ ကေရလာ ပြည်နယ်မှ ပေါ်လာသော ရှံကရအမည်ရှိ ဗြဟ္မဏပညာရှိတစ်ယောက်သည် မင်း၏အာဏာအားကိုးယူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်း တော်များနှင့် ၀ါဒယှဉ်ပြိုင်ပြီးရှုံးနိမ့်သော ရဟန်းတော်များကို ဟိန္ဒူဘာသာသို့ ကူးပြောင်း စေသည်။ မကူးပြောင်းပါက ပွက်ပွက်ဆူ နေသော ထောပတ်ဒယ်အိုးတွင်းသို့ နှစ်၍သတ်ပစ်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်းအများစုမှာ မဟာယာနမှ တစ်စင်ခွဲ၍ ထောင်လာသော ၀ဇီရယာန အောက် လမ်းဆရာကြီးမျိုးသာ ဖြစ်သဖြင့် စာပေအယူဝါဒအနေဖြင့် ရှံကရကို မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပေ။ သို့အတွက် သာသနာနှစ် ၁၃၀၀ ခန့်က စ၍ အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်းများ မရှိတော့ချေ။
(မာဝေ၏ သင်္ကရဒိသာဝိဇယကျမ်း ၁-၉၃)
အပေါ်မှာရေးထားတာကတော့ ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏတို့ သာသနာအပြင်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံတွေပါဘဲ ။ သာသနာနှစ် ၁၇၀၀ လောက် ရောက်တော့ တူရကီနွယ်ဝင် မိုဟာမက်ဘိန်ဗခတိယာရ်သည် အိန္ဒိယ မြောက်ပိုင်း တစ်ခုလုံးကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များကို ကျောင်းတိုက်ကြီးများအတွင်းမှာပင် မီး တိုက်၍ သတ်ဖြတ်လိုက်လေသည် ။ ထိုအခါမှ စ၍ အိန္ဒိယဒေသတစ်ခုလုံး ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက် ခဲ့ရပါ တော့သည် ။
နောက်ဆုံးဂေါတမ အမည်ပင်ပျောက်ကာ မဟေသရခေါ် ဣဿရ တဖြစ်လဲ အ၀လောကိတေသရ နှင့်အစား ထိုးကြ၏ ။ ထိုဘုရား လောင်း နတ်သားအဖြစ်မှ တဖန်မိန်းမ အသွင်ပြောင်းကာ တာရာဒေ၀ီ စသည် နတ်သမီးများ ဖြစ်ကြကုန်၏ ။ ကာလီစသော ယက္ခနီ များဖြင့် အစားထိုးပြန်၏ ။ ဝေရောစန ၊ အမိတာဘာစသော မှော်ဘုရား ကြီးများပေါ်လာသောအခါ ဗုဒ္ဓသည် သာကီဝင်မင်းသား ဂေါတမဗုဒ္ဓမဟုတ်တော့။
မှော်ပညာပိုင်စိုးသော နတ်ကြီးတစ်ပါးမျှသာ ဖြစ်သွားတော့၏ ။ ဤကား ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့ အတ္တ၀ါဒ ၊ ဗြဟ္မ၀ါဒကို ဗုဒ္ဓ၀ါဒအတွင်းသို့ လိမ္မာပါးနပ်စွာ သွတ်သွင်းခဲ့ပုံပင်ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့်လည်းမတူ၊ ဟိန္ဒူဝါဒ နှင့်လည်း အတိ အကျမတူသော မဟာယာန၀ါဒကို တဖြည်းဖြည်းချင်း တီထွင်ခဲ့ကြ၏ ။ နှစ်ပေါင်းငါးရာခန့်ကြာသောအခါ မဟာယာနနှင့် ဟိန္ဒူဝါဒတို့ ခွဲမရအောင်ချွတ်စွတ်တူလာ၏ ။ နောက်ဆုံး၌ ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့၏ တန္တရ၀ါဒကိုပင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒတံဆိပ် ခပ်နှိပ်ပေးလိုက်၏။ တန္တရ၀ါဒမှာ အရက်နှင့်မိန်းမကို ရှေ့တန်းတင်၏ ။ စုန်း၊ ကဝေ၊ တစ္ဆေ၊ ပယောဂ၊ အင်း၊ အိုင်၊ ခါးလှည့်၊ လက်ဖွဲ့ ၊ မန္တာန်တို့ကို ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုင်းဘုတ်အောက် ရွှေ့ထားလိုက်ကြသည်။
ဤကား ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့ သာသနာအတွင်းသို့ ၀င်၍ တိုက်ခိုက်ပုံပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာသည် အနတ္တ (အရာအားလုံး ကိုယ်မပိုင်အစိုးမရ) ၀ါဒဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူဘာသာကား အတ္တ၀ါဒ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်းလာသည်နှင့် သဗ္ဗေဓမ္မာ အနတ္တာတရား (အားလုံးကိုယ်မပိုင် အစိုးမရ အနတ္တ) ဟူ၍ ဟောကြားလိုက်ရာ အတ္တကို အမှီပြု၍ အညွန့်ခူးစားရသော ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့ စားပေါက်ပိတ်ခဲ့ရသည်။ တစ်ဖန်သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးလက်ထက်တွင် သတ္တ၀ါများကိုသတ်ဖြတ်၍ ယဇ်မပူဇော်ရဟု ဥပဒေဖြင့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ရာ ယဇ်ပွဲကိုအမှီပြု၍ ဆီစိုခဲ့ရသော ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့နှုတ်ခမ်းမှာခြောက်သွေ့ ခဲ့ကြရပြန်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် သူရဿတီအမည်ရှိသော မြစ်ကလေးတစ်စင်းရှိသည်။ နွေအခါတွင် သောင်များပေါ် သောအခါ ထိုသောင်များပေါ်တွင် ကုလားများက သီးပင်စားပင်များစိုက်ကြရာ အလွန်ဖြစ်ထွန်းသည်။ ဒါလောက်ဖြစ်ထွန်းရင် ဒီမြစ်ကိုစောင့်တဲ့နတ်က 'မ' တာဖြစ်မယ် ဟူသော စိတ်ကူးယဉ်အတွေး ပေါ်လာကြသည်။ သာယာညင်းပျောင်းစွာ စီးဆင်းသောမြစ်ရေကိုကြည့်၍ နတ်သမီးသာဖြစ်ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ မြစ်ကမ်းနားတွင် နတ်သမီးရုပ် တစ်ရုပ်ထုလုပ်ပြီး ကိုးကွယ်ကြလေတော့သည်။နာက် တဖြည်းဖြည်းနယ်ကျယ်လာရာမှ ဗေဒင်သုံးပုံကို သူရဿတီလက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်သောအခါ သူရဿတီသည် ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်အားလုံးတို့၏ အထွတ်အမြတ်ထားရာ နတ်သမီးအဖြစ်သို့ ရောက်သွားတော့သည်။ ထိုမှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀င် လာသောအခါ ဘာသာရေးလုပ်ကြံလိုသူ တစ်စုက ဗေဒင်သုံးပုံစောင့်တာဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အလေးထားကိုးကွယ်ကြမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက အလေးထားကိုးကွယ်ကြစေရန် ဗေဒင်သုံးပုံအစား ပိဋကတ်သုံးပုံ စောင့်သည်ဟုဆိုကာ သူရဿတီလက်ထဲသို့ ဗုဒ္ဓ၏တရားရတနာ ပိဋကတ်သုံးပုံကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့သည်။ (ဗေဒင် လေးပုံ ဖြစ်ပါသည်.. ခွန်မြလှိုင်)
ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် တရားတော်များကို သံဃာတော်များက ပထမသင်ဂါယနာမှ ဆဋ္ဌမ သင်ဂါယနာတိုင်အောင် ဆင်းရဲ မျိုးစုံ ကြားမှ မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ ယခုလည်း စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းဆဲ နောင်လည်း စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်း နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ အသက်အသေခံပြီး ပိဋကတ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သောသံဃာတော်များ မျက်နှာကိုမျှ မထောက်ဘဲ ပိဋကတ်သုံးပုံကို သူရဿတီစောင့်သည် ဆိုကာ နတ်သမီးရုပ်ကို ဘုရားရုပ်ပွားတော်ရှေ့တည့်တည့်မှာ လာထားကြသည်။ အထားခံသည့် ဂေါပကကလည်း အထားခံကြသည်။ (မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင်တွင် ဘာသာရေး အမေးအဖြေ ကဏ္ဍတွင် အမြဲ ဖြေပေး သော ဆရာတော် ရဝေထွန်း ကလဲ သည် အတိုင်း မိန့်ဆို ဖြေကြား ထားသည်ကို ကလေး အရွယ်ကပင် ဖတ်ရှု လေ့လာ မှတ်သား ဖူးပါသည် ... ခွန်မြလှိုင်)
မဟာယာန၀ါဒများ၊ တန္တရယာန၀ါဒများ၊ မန္တရယာန၀ါဒများ
တဖြည်းဖြည်းဂေါတမဗုဒ္ဓသည် ကမ္ဘာကို ဖန်ဆင်းသူဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ၏ ။ ထိုမှတဆင့်တက်၍ ဖန်ဆင်းရှင် ဗြဟ္မာ ဗိဿနိုး နှင့် ဂေါတမ ကို ပူးပေါင်းလိုက်ကြသည်။ အမည်သာကွဲ၍ ဘုရားတစ်ဆူတည်း အတူတူ ဟုဆိုကြ သည်။ တစ်ဖန်ဂေါတမဗုဒ္ဓသည် ဗိဿနိုး နှင့်တန်းတူ မဟုတ်တော့ဘဲ ဗိဿနိုးဝင်စားသူ၊ ဗိဿနိုး၏ ကိုယ်ပွား တစ်ထောင်အနက် ကိုယ်ပွားအ၀တာရတစ်ခုမျှသာဟုဆို၍ အောက်တစ်ဆင့် နှိမ့်လိုက်သည်။ ဟိန္ဒူတို့သည် သဒ္ဓမ္မပုဏ္ဍရိကသုတ်နှင့် ဂဏ္ဍဗျူဟာသုတ်များ၌ ဗုဒ္ဓသည်လူသားမဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ နတ်ဘုရား ဖြစ်သည် ဟု ဆိုကြ၏ ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဗြဟ္မာ (ဣဿရ) ကို လက်မခံကြချေ။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓကိုလွန်စွာ ကြည်ညို ကြ ကြောင်း သိထားသော ဗြဟ္မဏပုဏ္ဏားရဟန်းများ က ဗုဒ္ဓသည်လူသားမဟုတ်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ နတ်ဘုရားကြီးဖြစ်သည်ဟု ဟောပြော ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများစုကမူ သဒ္ဓါလွန်နေကြ၍ ကိုယ့်ဘုရားကို နတ်အဖြစ် မြှင့်တင်သည်ကို ကျေနပ်နေကြ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ဗုဒ္ဓသာသနာ့ဘောင်အတွင်းသို့ ရဟန်းအသွင်ဖြင့် ၀င်ရောက်ကာ ပါဠိတော်အဌကထာများ ကို ကိုယ်လိုရာဆွဲ၍ ရေးသားပြီး မဟာယာန ၀ါဒများ၊ တန္တရယာန၀ါဒများ၊ မန္တရယာန၀ါဒများကို တီထွင်ဟောပြောကြလေတော့သည်။ ဤကား ဗုဒ္ဓ၏အနတ္တဒေသနာကို အတ္တဒေသနာ ဖြစ်အောင် ယဉ်ယဉ်လေးဖျက်ဆီးကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့ ဗုဒ္ဓကိုသေးသိမ်ပြီးအရာမရောက် ဖြစ်သွားအောင် တဖြည်း ဖြည်း ချင်းအစပျောက်ဝါးမျိုပုံမှာလည်း ကြည့်တတ်သူများမှသာ မြင်နိုင်ပေသည်။
ဤနေရာ၌ သူတစ်ပါးအပြစ်ကို ကြည့်ခြင်းထက် မိမိအပြစ်ကိုသာကြည့်၍ ပြုပြင်ခြင်းသည် လောကီလောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသော ကောင်း ကျိုး ချမ်းသာကို ရနိုင်သည်ဟူသောစကားအတိုင်း အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အားနည်းခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး မြန်မာပြည်မှ ရဟန်းတော်များ အနေဖြင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓအယူဝါဒမဟုတ်သော အရာများကို ဖယ်ရှား ကြရပေမည် ။
ဆေး ၊ ဗေဒင် ၊ လက္ခဏာ ၊ နက္ခတ် နှင့်တကွ လောကီထွက်ရပ် ၀ိဇ္ဇာဂိုဏ်း ဘုန်းကြီးများ များပြားလာခြင်းသည် ဗုဒ္ဓသာသနာ အားနည်း ပျောက်ကွယ်ခြင်း၏ အရေးကြီးဆုံးသော အကြောင်းဖြစ်ပေသည် ။ ထိုဂိုဏ်းဘုန်းကြီး များကို မဟာယာနဘုန်းကြီးများက မွေးဖွား ပေးလိုက်သည် ။ မဟာယာနဘုန်းကြီးများကို ယောဂါစာရ နှင့် မဇ္ဈိမိက ဂိုဏ်းများက မွေးဖွားပေးလိုက်သည် ။ ထို ယောဂါစာရ နှင့် မဇ္ဈိမိက ဂိုဏ်းများကို မဟာသံဃိက ဂိုဏ်းကြီးက မွေးဖွားပေးလိုက်သည် ။ မဟာသံဃိက ဂိုဏ်းကြီးသည် ဒုတိယ သင်္ဂါယနာ တင်သည့် အချိန်မှစ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် ။
သာသနာကွယ်ခြင်းအကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပါဠိပုဒ်ပျက်စေသော ဥုံ၊ သြောင်း ခံရွတ်ခြင်းပါပဲ။ ဒီ ဥံ၊သြောင်း စသော ပါဠိ ပုဒ်ပျက်များဟာ ဟိန္ဒူဘာသာ ကျမ်း(၇)ကျမ်းမှာသာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိပိဋက တော်လာမဟုတ်ပါဘူး။ ဥုံ ရဲ့အဓိပ္ပါယ် ကတော့ ဟိန္ဒူဘာသာမှာ နတ်မင်းကြီးများ၏ ကိုယ်စားလှယ်လို့ အဓိပါယ် ရတာပါပဲ။ ဥုံ ဟူသည် ဥုမ်မှ ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည် ။ ဥုံကို ပုဒ်ခွဲလိုက်ရင် အ၊ အု၊ အမ် ဟူ၍ဖြစ်လာသည် ။ အ သည် လောကကို ဖန်ဆင်းသော ဗြဟ္မာကို ကိုယ်စားပြုသည် ။ အု သည် ဗိဿနိုး နတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည် ။ အမ် သည် သျှီဗစ် ခေါ် သျှီဝနတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည် ။ ထိုနတ်သုံးမျိုးစလုံး ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏဘာသာမှာသာ ရှိသော ကြောင့် ဥုံ ၊ သြောင်း ပါသော ဂါထာ ၊ မန္တာန် မှန်သမျှကို ဟိန္ဒူ ဗြဟ္မဏ ဂါထာ ၊ မန္တန်ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ ၄င်း အချက်ကို သတိမထားမိသော ဆရာအချို့က ဘုရားဟောဂါထာ အချို့ကိုပင် ဥုံ ၊ သြောင်း ခံ၍ ရွတ်ဆိုနေကြရာ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး အရောခံ ရသလို ဘုရားဟောပါဠိအချို့မှာ ဂုဏ်ငယ်ကြရပါသည် ။
ဘုရားကိုပူဇော်တာဖြစ်လို့ ကုသိုလ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မသန့်ရှင်းဘူး။ ဘုရားကိုးဆူပူဇော်တာဟာ ထေရ၀ါဒမှ ကျင့်စဉ်တစ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားကိုပဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ပူဇော်လိုက်ပါ။ ဘယ်ကစသလဲ ဆိုတော့။ ဝေသာလီပြည် ကပ်ဆိုက်တော့ ပြည်သူတွေက နတ်မင်းကြီးကိုးပါးက လုပ်ထားတာဆိုပြီး နတ်မင်း ကြီးကိုးပါးကိုပူဇော်ဖို့အတွက် ဗလိနတ်စာပူဇော်ပွဲဆိုပြီး သတ္တ၀ါကိုးကောင်၊ ကိုးမျိုး နဲ့ပူဇော်ကြတာပါပဲ။ ဘုရားကိုး ဆူစင်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင်က အလယ်က ၊ ဘေးမှာ ရဟန္တာအရှင်မြတ်များ။ ထပ်ပြီးတော့ ၀န်းရံထား တာက နတ်မင်းကြီးကိုးပါး။ ထက်ပြီးပါပါသေးသဗျာ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်များဖြစ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်ကိုးကောင်။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာ ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို ရောနှောပြီး စင်တစ်ခုတည်းမှာ ဗြဟ္မဏတွေနဲ့ရောပြီး ကိုးကွယ် တာ ဖြစ်သင့်သလားဆိုတာ။ ဒီနေရာမှာ စင်လို့အသုံးပြုတာ အတော်ပင် မတင့်တယ်တာပါ။ မြတ်စွာ ဘုရား ရှင်တော်မြတ်ကို စင်ပေါ်တင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ စံ ကျောင်းတော်ဆိုပြီး အသုံးပြုရပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ပြောပါသေးတယ်။ ဘယ်ဘုရားလေးက ဘယ်မှာနေ။ ဘုရားကိုးဆူဆရာက ဘုရားဆရာ လိုလို ဆရာလုပ်နေတာ များ။ ရွတ်ဖတ် နေတာ ကလည်း ဘေးကင်း အောင်ကြီးပဲ။ ပုဏ္ဏားတွေရဲ့လေမျိုး။ စဉ်းစားကြပေါ့ဗျာ။ ရမ်းရမ်း မလုပ် ကြပါနဲ့။ ကိုးန၀င်းမိုးလင်းမှ သိမယ်ဆိုတာလည်း ဘာများထူးတော့မှာလဲ။ ဒီကစတာပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကို တစ် ခေါက်ပဲရရ စိတ်ထဲမှာ သန့်သန့်လေးပွားလိုက်ပါ။ ဗုဒ္ဓါနုဿတိဖြစ်အောင် ပွားများကြပါ။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင် ပွင့်တော်မူပြီးခဲ့သော နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားရှင်များအကုန်လုံးကို ပူဇော်ကိုးကွယ်ပါ။
(၁) ကုလဗုဒ္ဓဘာသာ (မိရိုးဖလာကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
(၂) လာဘဗုဒ္ဓဘာသာ (လာဘ်လာဘကို လိုချင်၍ကိုးကွယ်ရသော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
(၃) ဘယဗုဒ္ဓဘာသာ (ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်၍ကိုးကွယ်ရသော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
ဤသုံးမျိုးကို အောက်တန်းစား ဗုဒ္ဓဘာသာဟုခေါ်ဆိုသည်။
(၄) သဒ္ဓါဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ (သဒ္ဓါကိုအရင်းခံ၍ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
၄င်းကို အလတ်တန်းစား ဗုဒ္ဓဘာသာဟုခေါ်ဆိုသည်။
(၅) ပညာဓိကဗုဒ္ဓဘာသာ (ပညာဉာဏ်နှင့်ယှဉ်၍ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ)
၄င်းကို အထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာ ဟုခေါ်ဆိုသည်။
အထက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်နေသူများသည် မည်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်မည်၊ မည်သည်အဆင့်အတန်း တွင် ပါဝင်နေမည်၊ မည်ကဲ့သို့ပုထုဇဉ်များဖြစ်မည်ကိုတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်စဉ်းစားကြည့်လျှင် အတွေးတွင် အထင်း သားပေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ ကိုယ်ကိုတိုင်ဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာလဲဆိုတာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားကြစေ ချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ဝေဖန်နိုင်သော ဉာဏ်ရင့် သန်အောင် ကြိုးစားကြပါ။ တော်တော်များများ ဒီ ဒိဋ္ဌိ တွေ မပျောက်တာကို အတော်လေးတွေ့ရပါတယ်။ အောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာ မဖြစ်စေလို၍ ပညာဉာဏ်နဲ့ယှဉ် သော ပညာဗုဒ္ဓဘာသာ(အထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာ) ဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒနဲ့ပါ။ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဤကား လုပ်သင့်သလား မလုပ်သင့်ဘူးလားဆိုတာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ ဒိဋ္ဌိတရားများ ကင်းရှင်း၍ သာသနာကို စောင့်ရှောင်နိုင်သော သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေ။
(ခွန်မြလှိုင်မှ) ဗေဒင် ပညာကို လေ့လာ လိုက်စား ဆင့်ပွားသူ အများစုမှာ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင် ဗြဟ္မဏ များ ဖြစ်ကြသော်လည်း ရှေးမြန်မာ အစဉ်အဆက် ယောက်ျားကောင်းတို့ တတ်အပ်သော အဌာရသ ဆယ့်ရှစ်ရပ် ထဲတွင် ဆင်စီး မြင်းစီး ဓားရေး လှံရေး ဂဏန်း သင်္ချာ တို့နှင့် အတူ ဗေဒင် နက္ခတ်လဲ အတတ်ပညာ တစ်ရပ် အနေနှင့် ပါဝင်ပါသည်။ ဗေဒင် ပညာသည် ကိုးကွယ်စရာ ဘာသာ မဟုတ် သော်လည်း ယခုခေတ် ကွန်ပြူတာ ပညာရပ်လို ဂဏန်း သင်္ချာ ဘာသာရပ် တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ကို ဘာသာရေးနှင့် ရောထွေး အမှတ် မှားမှု မရှိစေရန် နှင့် သတိပြုမိရန် တင်ပြ အပ်ပါသည်။
ပညာဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘသာရေး လိုက်စားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ပေါများ နိုင်ကြ ပါစေ။
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 2:36 AM
စာရေးသူက ဆရာတော် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ..
ဆရာတော် မိန့်ကြားတာကို မူရင်းအတိုင်း ရေးလိုက်လို့ပါ။ အခုလို ပိုစ့်အနေနဲ့တင်ပြီး စာရေးလိုက်တော့ “အရှင်ဘုရား”ဆိုတော့ အသုံးအနှုန်းများ ဖြုတ်ပေးစေလိုပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ စကားသည်သာ ဆရာတော် မိန့်ကြားတာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.. ဆရာတော်ရဲ့ စကားကို ဦးစွာတင်ရေးသားထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Linght of Buddhism said...
ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓတရားတော်များကို လိုက်နာကျင့်ကြံတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ကြုံရင်လည်း လာလည်ပါဦး ....www.lightofbuddhism.blogspot.com .သာသနာကို ဖျက်စီးသည့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ ခေါင်းစဉ်လေးကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပါစေဗျာ။
လှိုင်ရေ…အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့postလေးပါ…မှတ်သားစရာတွေ အများကြီးပါတာမို့ဘုန်းဘုန်းကို ရှိခိုးဦးညွှတ်ပါတယ်…တဆင့်ဝေမျှပေးတဲ့သူကိုရော…postအဖြစ်တင်ပေးတဲ့လှိုင်ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်…